U-Apple uyakunikela ngedola enye kwi-WWF kuyo yonke into oyithengileyo eyenziwe kwiivenkile zakwa-Apple kwaye ihlawulwe nge-Apple Pay | Ndisuka mac
U-Apple uyakunikela ngedola kwi-WWF kuyo yonke into oyithengileyo eyenziwe kwiiVenkile ze-Apple kwaye ihlawulwe nge-Apple Pay
Ngokuzibophelela kwayo kwindalo esingqongileyo, iApple iphinde ibhiyozele uSuku loMhlaba kangangeentsuku ezininzi, nokuba ingo-Epreli 24 ngokusemthethweni. Ukusukela namhlanje ukuya kuthi ga nge-24 ka-Epreli, bonke abasebenzi beeVenkile zeApple kwihlabathi liphela batshintshe ihempe eluhlaza okwesibhakabhaka njengeluhlaza kwaye iphepha le logo le-Apple sele liluhlaza. Kodwa ayisiyiyo yodwa isenzo, esingumfuziselo okanye hayi, sokuba amakhwenkwe aseCupertino acwangcise ukuwenza ngale mihla, kuba nge-Apple Watch sinako Fumana izitikha ezikhethekileyo ukuba sichitha ngaphezulu kwemizuzu engama-22 sizilolonga ngomhla wama-30.
Enye yezinto eziza kwenziwa ngu-Apple kwezi ntsuku, ekugqibeleni zinento yokwenza nokunceda ii-NGO ezikhathalela yonke imihla ukukhusela okusingqongileyo, kunye neentyatyambo nezilwanyana. Ukusukela izolo kude kube ngu-Epreli 28 olandelayo, uAI-pple iyakunikela ngedola kwi-WWF kuthengiso ngalunye olwenziwe kwiiVenkile ze-Apple kwaye intlawulo yayo yenziwa nge-Apple Pay. Ixabiso leemveliso alizonyuki nanini na kwaye linika idola nokuba siyayithenga imeko ye-iPhone okanye ukuba sithenga eyona MacBook Pro enezixhobo.
I-WWF, iWorld Wildlife Fund, ihlala isebenza no-Apple, ngakumbi ngoMhla woMhlaba. Kunyaka ophelileyo yasungula icandelo lethutyana elibizwa ngokuba yi-Land Applications kwiVenkile ye App, ngawo wakwazi ukunyusa ngaphezulu kwe-8 yezigidi zeedola. Kodwa abafana abavela eCupertino ayisiyiyo kuphela ebonisa ukuzibophelela kwabo kwindalo esingqongileyo, kuba ezinye iinkampani ezinkulu ezinje ngeMicrosoft noGoogle nazo ziyasebenzisana ukubhiyozela olu suku kwaye zizame ukwenza abemi bazi ngokubaluleka kokuzibophelela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Apple uyakunikela ngedola kwi-WWF kuyo yonke into oyithengileyo eyenziwe kwiiVenkile ze-Apple kwaye ihlawulwe nge-Apple Pay
I-Intel ifuna ukumelana ne-AMD ngokukhawulezisa isicwangciso sayo sokumiliselwa
UNvidia uhlaziya abaqhubi bePascal ukulungisa umba wobusuku kwiMacOS